Tinye Ahịa Pop na Ecommerce Saịtị gị Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 9, 2019 Wenezdee, Jenụwarị 9, 2019 Douglas Karr
Ihe akaebe dị oke egwu mgbe ndị na-azụ ahịa na-eme mkpebi nzụta na saịtị ecommerce gị. Ndị ọbịa chọrọ ịma na saịtị gị nwere ntụkwasị obi yana ndị ọzọ na-azụ gị. Ọtụtụ oge, saịtị ecommerce na-anọdụ dị iche iche na nyocha ndị ahụ adịla ochie ma bụrụ ndị ochie na-emetụta mkpebi ndị na-azụ ahịa ọhụrụ.
Otu njirimara ị nwere ike itinye, n'ụzọ nkịtị, na nkeji ole na ole bụ Ahịa Pop. Nke a bụ mmapụta aka ekpe nke na - agwa gị aha na ngwaahịa mmadụ zụtara n’oge na-adịbeghị anya. Ahịa Ahịa na-enwe mmetụta dị oke egwu nye onye nwere ike ịzụta ya nwere mmasị na ngwaahịa na saịtị gị mana ọ maghị ma enwere ike ịtụkwasị saịtị gị obi. Site n'ịhụ ọtụtụ ihe ịzụrụ n'oge na-adịbeghị anya site n'aka ndị ahịa ndị ọzọ, ha na-amata na ị bụ saịtị e-commerce a pụrụ ịtụkwasị obi.
Programming a usoro dị ka nke a nwere ike ịbụ ntakịrị ihe ịma aka, mana Ketkpa anụ ewuwo usoro ikpo okwu di ike nke jikotara aka na Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento, Weebly na Lightspeed. N'iji AI, Beeketing nwere ike ịchekwa ma hazie atụmatụ ha iji bulie ahịa ecommerce zuru ezu.
Ọ bụrụ na ị gaa na saịtị WordPress m, ị nwere ike ịchọpụta na m nwere ọrụ ngalaba. Otutu ndi mmadu amaghi ya ya mere enwere m ikike inweta ahia kwa ọnwa. M arụnyere pop ahịa na nkeji ole na ole mgbe e mesịrị na ikpo okwu na-arụ ọrụ zuru oke. Ọ bụghị naanị na o nwudịrị ihe ndị ị zụtara n'oge gara aga, mana enwere m ike ịgbakwunye ngwaahịa m chọrọ ịkwalite karịa.
N'ime otu ụbọchị, enwere m ọrịre ọzọ!
The Ahịa Pop egosi na-elekọta mmadụ abụghị naanị atụmatụ dị n'ime Beeketing, ịnwere ike ịgbakwunye ole na ole. Nke kachasị mma, ịnye ọnụahịa na-amalite n'efu ka ị nwee ike inye ya nlele ule!
Ndị ọzọ Ketkpa anụ ecommerce gụnyere gụnyere:
Mbuli Ahịa - Nkwado Upsell na Cross-sell
Ntuziaka nkeonwe - kwado ngwaahịa ma bulie uru iwu bara.
Igbe Igbe - Dịkwuo ahịa na dere popups.
Naghachi Cart Pusher - ihe nchọgharị maka ịnweta ụgbọ.
Ego Ihe Ntụgharị - na-agbanwe ọnụahịa na-akpaghị aka maka ahịa mba ụwa.
Mobile Ihe Ntụgharị - iji bulie ihe nchọgharị ekwentị.
Help Center - windo nkata iji nyere ndị ọbịa aka.
Obi ụtọ na ozi - njikọta na Facebook akpaghị aka.
MailBot - maka azịza email ahaziri iche.
Email obi ụtọ - ozi-e-ekele site n'aka onye nwe ụlọ ahịa.
Ngụda ụgbọ - iji mepụta echiche nke ịdị ngwa na ahịa.
Ọpụpụ ndenye ego - mee ka ndị mmadụ kekọrịta ihe ha zụtara na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mgbe ị debanyere aha, ha na-enye gị njikọ njikọta… ya mere nke a bụ nke m:
Tags: gbahapụrụ ụgbọecommerce nkataecommerce kwadoroọkụwee jirikwa yaWeebly na Lightspeed